I-Quiet 1BR Renovated Apt- Eduze kwaseDowntown Hot Springs - I-Airbnb
I-Quiet 1BR Renovated Apt- Eduze kwaseDowntown Hot Springs
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Kaloa
U-Kaloa Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lethu elisanda kulungiswa kabusha elingaphansi kwesitezi esingu-1 linendawo yasepulazini ebukekayo ene-steampunk vibe, kanye nokuthinta umlingiswa wendawo.
QAPHELA: Ngenxa ye-COVID-19 siqinise izinqubomgomo zethu zokubhuka. Sivalwe izinsuku ezi-2 phakathi kokubhukha ukuze sihlanzwe futhi sidinga ukuhlala okungenani izinsuku ezi-3.
Ibha yekhofi yasendlini kanye nekhishi eligcwele kugcwele izinto zesidlo sasekuseni ngakho-ke usukulungele ukusa. Yenza ukudla kwakho ekhaya noma phuma uyojabulela izindawo zokudlela zasendaweni. Kukhona ishawa entsha ekhanyayo necwebezelayo, indawo yokusebenza ethokozisayo nesebenzayo yokudonsela phansi, ikhebuli ye-TV eyisisekelo, nendawo yomlilo kagesi yobusuku obupholile.
4.97 · 64 okushiwo abanye
Iklanywe eningizimu ye-Black Hills yase-South Dakota, idolobha lase-Hot Springs lingaziqhayisa kungekhona nje ngobuhle balo obuhle neziphethu zokuphulukiswa kwemvelo kodwa futhi liyisakhiwo esiyingqayizivele samatshe esihlabathi. Ngokusondelene nazo zonke izindawo ezithandwayo ze-Black Hills, i-Wind Cave National Park, i-Angostura State Park ne-Lake, i-Custer State Park, i-Wild Horse Sanctuary, i-Hot Springs inokuningi ongakujabulela! Kukhona futhi indawo yegalofu esezingeni lomhlaba futhi, indawo edume umhlaba wonke yokudlala i-mammoth eqhele ngamakhilomitha ambalwa ukusuka eminyango yethu. Ngaphezu kwalokho, siwuhambo losuku olulula kude nezinye izikhumbuzo zikazwelonke kanye ne-Sturgis Bike eyaziwayo ebanjwa njalo ngo-August. Ungavakashela yonke i-Black Hills enhle ngokusuka endaweni yethu efihlekile yefulethi.
Ababungazi bahlala esizeni futhi ngokuvamile batholakala kunoma yini ongase uyidinge. Sithule kahle futhi sizokunikeza ubumfihlo.
UKaloa Ungumbungazi ovelele